I-Apple TV + ithathe amalungelo kwifilimu I-Macbeth Tragedy kunye no-Denzel Washington | Ndisuka mac
UIgnacio Sala | 13/05/2021 22:00 | Apple TV, Izaziso
I-Apple TV + ithathe amalungelo ukuya kwelandelayo Intlungu yaseMacbeth, Ifilimu yokuqala ebhaliweyo kwaye yayalelwa nguJoel Coen ngaphandle komntakwabo kunye neqabane lakhe lefilimu uEthan Coen. Imuvi Izakuqala kuboniswe kumabala emidlalo kwihlabathi liphela kwikota yesine ka-2021, ngaphambi kokuba kuqikelelwe kwihlabathi liphela kwi-Apple TV +.
Ngokomhla wokugqibela, ifilimu ithathwa njengeprojekthi eyaziwayo kunye nefayile ye- Olwa ixesha lokuwongwa. Iinkwenkwezi uFrances McDormand kunye noDenzel Washington, abaphumeleleyo kwi-Oscar, kwaye uCoen ngokwakhe uneeMbasa ezine zeAkhademi. Ngoluhlu olunje, kuncinci kakhulu okungahambanga kakuhle.
UMcDormand udlala uLady Macbeth kunye noWashington badlala uNkosi Macbeth, kwinguqulelo yomdlalo kaWilliam Shakespeare. Umboniso bhanya-bhanya wadutyulwa ngombala omnyama nomhlophe. UCoen naye ukhethe thintela nakuphi na ukufota ngaphandle, ukhetha into ayibiza ngokuba "ayiyonyani" yemiboniso yesandi.
Ezinye izinto eziphambili zenziwe nguBertie Carvel, uAlex Hassell, uCorey Hawkins, uKathryn Hunter, uHarry Melling, kunye noBrendan Gleeson. I-cinematographer, uBruno Delbonnel, abayili beempahla, uMary Zophres, kunye nomqambi, uCarter Burwell, abantu abadala baseCoen.
Esi sivumelwano siba sisihloko esinomdla kwixesha elizayo elibandakanya ifilimu CODA, ekhokelwa nguSian Heder, ophumeleleyo Amabhaso ama-4 kumnyhadala weSundance, kubandakanya neMbasa yaBaphulaphuli kunye neBhaso eliKhulu leJury.
Kwi-CODA, kufuneka songeze Finch, Kudlala uTom HanksIfilimu yamanga yesayensi evela kwi-Amblin Entertainment ekhokelwa nguMiguel Sapochnik, umboniso bhanyabhanya kulindeleke ukuba uboniswe kwi-Apple TV + kamva kulo nyaka
Kakhulu CODA njengaye Finch kunye Nentlekele ka Macbeth ziibhendi ezi-3 ezinomdla zeApple ze ukuze ufaneleke kwiiMbasa zeAkhademi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple TV + ithathe amalungelo kwifilimu iMacbeth Tragedy kunye noDenzel Washington